एजेन्सी । हिन्दु धर्ममा वास्तु शास्त्रलाई निकै मान्यता दिने गरिन्छ । तर पनि कहिले काहिँ हामी आफ्नो घरमा भइरहेका कति चीजहरुलाई वेवास्ता गरिरहेका हुन्छौ जसले तपाईलाई अन्त्यमा समस्यामा पार्न सक्छ । विस्तृतमा
विश्वकै कहालीलाग्दो पुल, जहाँ हिँड्न पनि मुस्किल पर्छ
वाह ! चाउचाउको घर
सपनामा निलेको औंठी, विपनामा औंला हेर्दा औंठी गायब
कसको विवाहमा भएको थियो सबैभन्दा धेरै खर्च ?
जेलमा निशुल्क टिभी हेर्न पाइने, जेलमा गएर फ्रिमा शो हेर्छु भन्दै चोरी गरेपछि...
रातको १० बजेपछि यस्ता काम गर्न हुँदैन
मंगलबारका दिन नङ काटे के हुन्छ ?
विश्व थर्कमान पारेका उत्तर कोरियाका शासक किम जोङ–उनबारे यी कुराहरु धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ
एक वर्ष अगाडिसम्म विश्वका शक्तिशाली देशहरुलाई ठाडो चुनौती दिने शासक हुन् किम जोङ–उन । पछिल्लो समय भने उनी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँग भेटघाट गरेपछि शान्त रहेका छन् ।
यो देशमा वियरका लागि भिख माग्छन् मानिसहरु ?
जर्मनी हाल विश्वका धेरै विद्यार्थी र पर्यटकहरुको केन्द्र बनेको छ । निकै ठुलो इतिहास बोकेको यस राष्ट्रमा केही आश्चर्य लाग्दा दृश्यहरु देख्न पाइन्छन् । आउनुहोस् हेरौ जर्मनीका केही यस्तै आश्र्च लाग्दा कुराहरु
यी शक्तिशाली देशहरुसँग कति छन् न्युक्लियर हतियारहरु
एजेन्सी । अमेरिका यस्तो पहिलो देश हो जसले परमाणु हतियारका कारण पुरै विश्वलाई थर्कमान पारेको थियो । नाजी सरकार पनि यही कारण अमेरिकासँग डराउने गरेको बताइन्थ्यो ।
शनिबार यस्ता खानेकुरा खाँदै नखानुहोस्
यदि कुनै व्यक्तिको कुण्डलीमा शनिदोष छ भने त्यस्ता व्यक्तिले शनिवारको दिन भोजन गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । शनिदेवलाई खुसी राख्न चाहने व्यक्तिले पनि शनिवारको दिन भोजन गर्दा केही सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । केही खानेकुरा यस्ता छन् जसलाई शनि देवताले मन पराउँदैनन् ।
नाइटो र अनुहारबीच यस्तो अजबगजबको सम्बन्ध !
एजेन्सी । हाम्रो नाभीको सिधा सम्बन्ध हाम्रो अनुहारसँग रहेको हुन्छ । अनुहारमा देखिएका समस्याका लागि नाभीसँग सम्बन्धित यस उपायहरुलाई प्रयोग गरेर अनुहारमा निखार आउने गर्छ ।
आखिर कस्ता गुण चाहन्छन् त युवाहरु आफ्नी प्रेमिकाबाट
युवतीहरुको मनमा एक खाले प्रश्न सधै उब्जिरहन्छ । केटाहरु कस्तो खाले युवतीहरु मनपराउँन्? यस्तो किन हुन्छ कि धेरै पुरुषहरु वा केटाहरु आफ्नी श्रीमती वा गलफ्रेण्डसँग एकाएक रिसाउन थाल्छन् ?
थाहा पाउनुहोस् ‘बी’ लेटरबाट नाम सूरु भएका मानिसहरुको गुण
‘बी’ लेटरबाट नाम सूरु भएका मानिसहरुको गुणहरु २ अंकसँग मेल खानेगर्छ । उनीहरु भावानात्मक हुन्छ् । अंक दुई ‘प्रेम’ को प्रतिक मानिन्छ । त्यस कारण पनि ‘बी’ बाट नाम सूरु भएका मानिसहरु अत्यन्त भावानामा बहने खालका हुन्छन् । मित्रता यिनीहरुको लागि बढी महत्व राख्छ ।
कुनै समयका चर्चित चेनस्मोकर बालक अहिले के गर्दैछन् ?
एजेन्सी । कुनै समय दुई वर्षिय इण्डोनेशिन बालक आर्धी रिजाल चुरोट खाने लतका कारण चर्चामा रहेका थिए । उनले एकदिनमा ४० खिली चुरोट खाने गर्थे । तर, उनलाई ८ वर्षपछि पुन भेटिएको छ र उनीबारे रिपोर्ट तयार पारिएको छ । हाल उनी ११ वर्षका भए । उनले चुरोट खाने लतलाई छोड्दै एउटा साधारण जीवन बिताउन थालेका छन् ।
श्रीमानले जुत्ता मात्रै किनेर हैरान पारेपछि...
मानिसको आफ्नो आफ्नो सोख हुने गर्छ । आफ्नो सपना पुरा गर्न मानिसहरु दिनरात मेहनत पनि गर्छन् । अरु कसैको प्रवाह नगरी उनीहरु आफ्नो कामलाई मात्र ध्यान दिने पनि गर्छन् ।
जर्मनका मानिसहरु एक वर्षसम्म सेक्सबिना रहन सक्ने !
संसारमा सेक्सका बारेमा धेरै समाचारहरु बन्ने गरेका छन् । यदी तपाईलाई एकवर्षसम्म सेक्स नगरीकन बस्ने भनियो भने बस्न सक्नुहुन्छ ? केही असंभव जस्तो लाग्न सक्ला ।
आकस्मिक गर्भनिरोधका लागि यी चार उपाय अपनाउनुहोस्
एजेन्सी । पछिल्लो समय अविवाहित महिलाहरु पनि गर्भवती हुने संख्या दिनप्रति दिन बढिरहेको छ । कोही गर्भनिरोधका लागि अस्थायी साधन प्रयोग गर्छन् त कति यसबारे जानकार नै हुँदैनन् अन्ततः गर्भपतन गराउने गर्दछन् ।
भगवानलाई हरेक ठाउँमा देख्न सकिँदैन तर अनुभव गर्न सकिन्छ !
यस्तो रहेको छ आजको तपाईको भाग्य– भदौ ३१ गते
एजेन्सी । चाणक्य नीतिका अनुसार पुरुषका लागि दुर्भाग्यका केही संकेतहरु रहेका छन् ।